Leve 2019 manova ny lalao ho an'ny fizahan-tany maharitra, fanentanana ny fiainana sy ny tontolo iainana
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Leve 2019 manova ny lalao ho an'ny fizahan-tany maharitra, fanentanana ny fiainana sy ny tontolo iainana
Amin'ny Alahady 05 Mey 2019, ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany dia ny hetsika Leve ihany ao amin'ny Villa Being ao Arnos Vale Tobago. Ao anatin'ny lohahevitry ny "FASHIONING OUR FUTURE", i Leve dia mampiditra singa goavambe amin'ny fomba fiainana Karaiba amin'ny kanto, lamaody, fahafinaretana amin'ny sakafo, rum, gadona, tantara an-tsehatra ary fampisehoana zava-kanto izay hanehoana ny fahaiza-mamorona Trinidad sy Tobago ary Karaiba midadasika. faritra.
Dr. Auliana Poon, Lehiben'ny Vondron'orinasa Leve ary talen'ny fitantanana ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany, namorona ny hetsika, dia nanamafy fa "ny orinasako dia manolo-tena hanao ny maodelin'ny orinasany sy ny asany ary hitohy maharitra; fanarahana ny mason-tsivana ho an'ny fampandrosoana ara-tontolo iainana sy maharitra amin'ny lafiny rehetra amin'ny orinasany. Nanampy izy hoe: “Mikasa ny hampiseho ny sisa eto an-tany izahay, ny faharetana amin'ny tsara indrindra; fa ny firaisana maharitra dia mety ho vetaveta; maharitra dia mety ho kanto ».
Manohy, Dr. Poon dia nanambara fa "amin'ny Leve 2019, dia manambatra ireo mpamorona, mpamorona lamaody, mpanakanto mahandro sakafo, ary mpanavao izay miezaka mamorona fomba fiaina Caribbean, etika ary maharitra kokoa. Izahay dia mifantoka amin'ny fampahafantarana ny tena fanovana azo atao, mametraka fanontaniana sarotra toy ny “Ahoana no fomba handresenao fiainana maharitra?” ho an'ireo vahininay ao Leve ary any amin'ny faritr'i Karaiba amin'ny ankapobeny ”.
Afaka miandrandra fampisehoana lamaody mahafinaritra ny vahiny amin'ny famolavolana endrika vaovao an'ny mpamorona lamaody Trinidad sy Tobago izay manova ny indostria ary mampiasa ny fiheveran'ny besinimaro momba ny fitohizan'ny tontolo iainana mba hamolavola etona endrika vaovao.
Eo ambanin'ny kanto noforonin'i Richard Young, ireo mpamorona manatrika ity famokarana kintana ity dia misy ny herin'aratra ao Karaiba Robert Young / The Cloth, Carnival ary mpamorona akanjo kristiana Christian Boucaud sy Rhion Romany ary koa kintana mihamangatsiaka amin'ny akanjo fitondra milomano ary miakanjo an'i Dominic Hutch .
Ho hita taratra ihany koa ny zava-kanto tsara, ao anatin'izany ny mpanakanto eto an-toerana Glenn Roopchand sy Jason Nedd ary koa ny artista maso ny faritra ary mpikatroka tontolo iainana Roberto Tjon-A-Meeuw (monina any Curacao) ary ilay mpanao hosodoko malaza an'i Dominica, Earl Etienne. Mpanakanto teratany Tobago Tomley Roberts no handrindra ity fampirantiana zavakanto ity. Chef Xenon Thomas dia hanome traikefa tsy manam-paharoa amin'ny fampifangaroana ny nahandro indizeny misy hevitra sy fitaomana iraisam-pirenena. Homena fifangaroana fialamboly eklektika.
Olona maherin'ny 300 - ao anatin'izany ny lohan'ny orinasa malaza, ny solontenan'ny corps diplomatika, ny mpanao asa soa, ny lamaody, ny mpitia zava-kanto ary ny mpitondra fanjakana ambony - no antenaina hanatrika ity foto-tsakafo tsy azo hadinoina ao amin'ny kalandrie hetsika sonia tany Tobago ity izay hisy akony tsara amin'ny Tobago sehatry ny fizahantany. Ho vonona ihany koa ny fanavaozana ny teknolojia satria halefa “mivantana” ao amin'ny pejy Facebook Leve ny hetsika. Hatao lavanty ireo hosodoko eo an-toerana sy isam-paritra mba hanasoavana ny Akademia momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany izay mifantoka amin'ny faharetan'ny tontolo iainana sy ny fanandratana ny olona.
Amin'ny taona fahefatra, ny tanjon'ny Leve 2019 dia: -
 Mampiseho amin'ny maha-mavitrika ny andraikitra ara-tsosialy ary manome sehatra ho an'ny hetsika manokana sy fiarahamonina izay hiantoka tontolo azo antoka sy maharitra ho an'ny taranaka faramandimby.
 Mampiranty ireo mpamorona lamaody "Trinbagonian" manan-talenta, mpampiofana mahandro sakafo, mpamokatra kojakoja ary mpialamboly ho an'ny mpihaino iraisam-pirenena.
 Mampiroborobo ny nosy Tobago ho toerana fialan-tsasatra ekôlitika ilaina
Ny "tantara maitso" an'i Villa Being, toerana ho an'i Leve, dia manomboka amin'ny maritrano. Izy io dia natsangana nifanaraka tanteraka tamin'ny tontolo manodidina sy ny maritrano sy ny estetika apetraka any Karaiba. Ny sary hosodoko eo an-toerana sy ny zavakanto hafa ihany no mandravaka ny faritra anatiny sy ivelany amin'ireo trano.
Ny filan'ny Villa Being dia ilaina maharitra ary misy fiatraikany lehibe amin'ny natiora. Na ny fanaka ivelany aza dia vita tamin'ny tavoahangin-dronono voahodina ary 100% eo an-toerana avokoa ny asa hazo sy ny asa hafa.
Maherin'ny 10 hektara, Villa Being dia fananana voajanahary izay misy karazana palma 30 isan-karazany, ary koa karazana hazo fihinam-boa 20 mahery sy legioma sy anana isan-karazany.
Ny Patron for Leve 2019 dia Andriamatoa Aad Biesebroek, Lehiben'ny Delegasionan'ny Vondrona Eropeana any Trinidad sy Tobago
Ny fizahan-tany Halal dia iray amin'ireo sehatra mandroso haingana indrindra amin'ny indostria
Ny seranam-piaramanidina Budapest dia mandray ny seranam-piaramanidina vaovao voalohany amin'ny taona